နို့ဦးရေအစွမ်း အံ့မခမ်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2. နို့ဦးရေဟာကလေးငယ်အတွက် ပထမဆုံးသောကာကွယ်ဆေးလို့တောင်တင်စားနိုင်ပါတယ်။
နို့ဦးရေမှာ ခုခံအားကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အချက်တွေ မြင့်မားစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ သွေးဖြူဥတစ်မျိုးလည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးကိုပိုးမွှားတွေကလည်ချောင်း၊ အဆုတ်နဲ့အူနံရံတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ IgAဆိုတဲ့ ပဋိပစ္စည်းလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
3. နို့ဦးရေက ကလေးဝမ်းစသွားသွားခြင်းမှာ လွယ်ကူစေဖို့အတွက် ဝမ်းပျော့ဆေးလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
နို့ဦးရေက သဘာဝဝမ်းပျော့ဆေးတစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့ ဘီလီရူဘင်လို့ခေါ်တဲ့ အဝါဓာတ်တစ်မျိုး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျန်မနေစေဘဲ ကလေးရဲ့ ငယ်ချီးနဲ့အတူပါသွားစေဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒီလို ဘီလီရူဘင်တွေဖယ်ရှားခြင်းက အသားဝါဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။
4. နို့ဦးရေမှာ ကလေးငယ်အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး အစာချေရလွယ်စေပါတယ်။
ကလေးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအရည်ဓာတ်တွေအားလုံးကို နို့ဦးရည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ နို့ဦးရည်မှာ နောက်မှထွက်တဲ့နို့ရည်ထက်စာရင် အသားဓာတ်များများ၊ သကြားဓာတ်နည်းနည်း၊ အဆီဓာတ်နည်းနည်းပါဝင်ပါတယ်။
5. နို့ဦးရေကကလေးရဲ့အူနံရံတွေကို အခြားပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ တံတိုင်းကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးမွေးချင်းမှာကလေးရဲ့ အူလမ်းကြောင်းကစိမ့်ဝင်လွယ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးထိခိုက်ခံစားလွယ်ပါတယ်။ နို့ဦးရည်က ကလေးရဲ့အစာခြေလမ်းကြောင်းကို အခြားပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းဒဏ်ကနေ တံတိုင်းသဖွယ်ကာရံပေးထားပြီး မိခင်စားတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်း ပိုပြီးခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အမေတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးငယ်ကို နို့ဦးရည်သေချာတိုက်ကျွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။